Matio 25:13 “Koa amin’ izany miambena hianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.”
Mbola ampitomboina amintsika mandrakariva anie ry havana ny fahasoavana amam-pidanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izany no tenin’Andriamanitra tonga amintsika androany ka angalantsika fampianarana indray.
Ity misy tantara kely iray entiko hitaritana ny saintsika. Misy fiara tsy matahodàlana izay, handeha lavitra sady hoany amin’ny toerana farany izay lavitra sady ambanivohitra indrindra izy. Nofenoina ny "reservoir", dia lasa nandeha tsy nanana solika fiandry fa dia nandeha tamim-pahatokiana hoe mahatody mandroso sy miverina izany. Rehefa tena nandeha anefa dia misy ny làlana ratsy izay tsy nampoizina, ka dia nitombo ny solika lany tamin’izany. Mazava hoazy fa tsy ho ampy ny hoentina miverina intsony ny soloika. Dia tahaka izany koa isika, mety ho reraka sy ho kivy ihany koa rehefa tsy ampy ny solika ao anatintsika, dia ny tenin’Andriamanitra. Ity tenin’Andriamanitra tonga amiko sy aminao anio ity dia fanoharana momba ilay vijiny folo, izany miandry ny mpampakatra. Efa fantantsika tsara izany tantara izany, nefa eto ny Tompo dia mampianatra antsika indray ny amin’ny fiomanana ny amin’ny fiavian’izany fotoana izany; dia ny fiomanana amin'ny fiavian'i Kristy amim-boninahitra. Ireo virjiny ireo dia samy nanomana ny solika avokoa, dia ao ilay dimy hendry izay efa niomana tamin’ny solika, fa ao kosa ireo dimy adala dia tsy ampy ny solika tao aminy. Io solika io raha ny ara-panahy no jerena dia ilay tenin’Andriamanitra ao anatintsika ao, io no solika entina mitsena izany fampakarana lehibe sy makotrokotroka izany. Ka izay manana ny tenin’Andriamanitra ka mitahiry izany ary miaina mandrakariva izany, dia maharitra izany. Ka mila kolokoloina tsara. Ny fikolokolona izany dia amin’ny alàlan’ny vavaka ihany sy ny fibebahana, fifankazarana amin’Andriamanitra.
Ka izany no mahatonga ny Tompo mampianatra antsika satria hifarana izao ny toana, samia tonga saina isika, samia mandinika tsara ny tenantsika sy ny amintsika tsirairay avy, manao ahoana ny solika ao anatoiko ato? Nanao ahoana ny fandraisako ny teni’Andriamanitra nandritra iny taona iny? Ka mampahatsiaro antsika ny Tompo ao amin’ny Matio 24:42; Marka 13:35; Marka 13:33; Marka 13:37.
Tsy fantantsika tokoa na ny andro na ny ora na ny fotoana izay hiavian’ny Tompontsika. Amin’izao dia mila manao jery todika ny fianantsika aloha isika, ary mila mandini-tena tsara inona avy ny dingana ara-panahy efa vitako? Nanao ahoana ny fiainam-panahiko nandritra iny taona iny? Nandroso ve sa nihemotra? Fa isika tsy naman’izay mihemotra hoy ny tenin’Andriamanitra. Mila mandroso mandrakariva, mitaiza sy mampitombo ny solika izay efa ao anatintsika, mizara amin’ny hafa mampahery ny hafa, satria izany no mampitombo ny herintsika, ny tanjaky ny finoantsika ny fahaizantsika mizara izany tenin’Andriamanitra ao anatintsika izany, entintsika eny amin’ny fiainana izany. Koa rehefa manao izany isika dia mahatsiaro mandrakariva fa mandalo ihany isika no eto, misy adidy napetraky ny Tompo amiko. Ka izany no anovozana hery mandrakariva, dia ny famakiana ny tenin’Andriamanitra, ny famakiana ny Baiboly; ny fandehana any am-piangonana mba hihainona ny tenin’Andriamanitra. Amin’ny alàlan’ny vavaka ihany koa izany.
Ary izany no mahatonga ny tenin’Andriamanitra hanambara izany izay hita ao amin’i Lioka 21:36 Sy ao amin’ny Efesiana 6:17-18. Izay mitondra antsika mba handray ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy. Io tenin’Andriamanitra io no afaka entintsika manohitra ny fahavalontsika dia ny devoly izany. Aoka ho fantantsika fa ny devoly dia mahalala tenin’Andriamanitra lavitra noho isika indraindray, satria ny devoly dia anjely nivadika tamin’Andriamanitra, ka izany no nandefasana azy nazera tety ambounin’ny tany. Ka fetsy sy mitady izay harapany mandrakariva izy ka rehefa tsy ampy tenin’Andriamanitra isika na ilay solika fitaiza izany dia malemy, mora ambakaina, izany teny izany dia hitantsika ao amin’ny Hosea 4:6. Mafy izany tenin’Andriamanitra izany, ary mampisaina tokoa satria io ilay tahaka ireo virjiny dimy adala, izay tsy nanomana solika, hadinony fa mila manangona anie, mila fenoina ny fanaovanjiro. Raha hitanao fa kelikely ny solikao, mandehana maka fampaherezana, mandehana manovo tenin’Andriamanitra amin’ny alàlan’ireny fampianarana maro samihafy ao amin’ny fiangonana izay misy anao ireny. Tsy rendrarendra akory no anaovana ireny fampianarana ireny, na fandaniana andro, fa mila raisina; ampitoerina ao anatintsika. Mila miorena amin’ny tenin’Andriamanitra ny finoantsika ry havana malala ao amin’ny Tompo. Ny fanahintsika mila vokisana, tahaka ny vantantsika ihany io, mila misakafo tenin’Andriamanitra, manao ahoana moa isika raha tsy ampy sakafo? Lasa malemilemy tsy mahavita na inona na inona. Mora azon’ny fakamp-panahy, marefo. Izany no mahazo antsika raha noana ny vatantsika, ary miafara amin’ny aretina mihitsy aza. Dia tahaka izany koa ny fanahintsika, mila omena sakafo mandrakariva, mila manana tenin’Andriamanitra iray isanandro isika fara fahakeliny entina miaina, atao fiainana mihitsy izany teny izany. Mila manana fiainam-bavaka isika, satria io no sabatry ny Fanahy ka tsy ho voatafiky ny satana isika. Miorena tsara amin’ny finoana, ary izany no mahatonga ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Apokalypsy 3:2-3. Izany no teny ambaran’Andriamanitra amiko sy aminao, mila miambina, miorena tsara amin’ny finona ny tenin’Andriamanitra. Tsy mandeha amin’ny herin’ny tenantsika, na izay saim-pantantsika fotsiny; fa izany no mahatonga antsika hanaonao foana ka lasa very ilay solika ao anatintsika, ka rehefa very izany dia maty ilay fanilo ao anatintsika ao; koa raha tiantsika ny hampateza izany dia mila Mankato ny tenin’Andriamanitra mandrakariva isika. Mila milona am-bavaka, sy mibanjina mandrakariva fa Jesosy mandehandeha, na izaho na ianao; isika izao no “JIRO” mpanazava izay napetrak’Andriamanitra ary isika ihany no tobin-tsolika andraisan’ny olona izany satria isika rehefa feno ny ao anatintsika dia mizara. Ka miparitaka amin’ireo manodidina antsika, ka mitondra fahazavana ho an’ny hafa ka samy manana izany solika avokoa ny rehetra ka rehefa tonga ny mpampakatra dia indro fa samy efa vonona ny tsirairay avy amin’izany foroana izany ka samy handray ny fanilony avy sy ny solika izay efa nangoniny avy ihany koa ka samy ho tonga amin’ny toeram-pifaliana izay nomanin’ny mpampakatra dia Jesosy Kristy Tompo.
Koa izao no tenin’ny Tompo amiko sy aminao ankehitriny izay hita ao amin’ny 1 Korintiana 16:13-14. Koa mila manana fitiavana isika eo amin’ny fiainantsika satria Andriamanitra dia fitiavana. Raha ny fiainana amin’izao fotoana izao no jerena dia ny fitiavana-tena no betsaka indrindra, tahaka ny zazakely vao teraka ihany isika raha izany no ataontsika; satria vao teraka ny zaza dia hoy izy hoe: “Ny hoa, ny hoa!!!” izany no tomany ataony zanak’olombelona voalohany indrindra. Fa Jesosy Kristy Tompoko anefa vao teraka dia fiderana an’Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no nataony voalohany indrindra. Raha isika angamba no tratran’izany hoe: zaza tonga dia miteny izany, misy mitsoaka tsy maharay lamba fa dia ento aho retongotro. Fa inona ity zavatra miseho ity, fa ilay zanak’Andriamanitra izay nanetry tena tao an-tranonomby; nandry teo ambony fihinanambilona irery ihany no nanao izany. Tsy nifidy ny toerana tsara na “Luxe” hoy isika amin’izao fotoana izao. Jesosy ilay mpanjaka nampihorohoro izao tontolo izao, eny fa na ny mpanjaka lehibe indrindra dia Heroda mpanjaka aza, izay manana ny lazany sy ny heriny teo amin’ny fanjakany dia nihorhoro raha vao nandre ny fahaterahan’ny Jesosy. Izany no herin’I Jesosy teo amin’ny manodidina azy. Nefa ny olona dia tsy nisy nahalala sy nahafantatra ny nahaterahany satria samy revo tamin’ny fiainana, fanomanana ny fisotana tamin’ny ankohonana. Isika ihany koa ry havana dia tahaka izany indraindray, variana amin’ny fameloman-tena miondrika mijery ny asa fivelomana, manahy ny amin’ny hohanina sy ny hotafiana. Ka tsy mahalala fa Mbola ao ilay Andriamanitra, izay tsiantsika; miandry antsika mandrakariva. Nefa isika rehefa reraka sy trotraka ny adim-piainana, efa resy tany amin’izay rehetra nalehantsika rehetra tany izay vao mitodika amin’io Andriamanitra io. Ankehitriny ny Tompo miantso ahy, miantso anao, mba hiorina tsara, hitoetra amin’ny finoana. Mila matanjaka tsara eo anatrehan’izany ka tsy hihorohoro manoloana ny fahavalo na dia mierona tahaka ny liona tanora mitady izay harapany aza izy. Dia tsy hanan-tahotra fa hijoro mandrakariva, ka hahery amin’izay rehetra miseho sy mitranga. Ka dia hanana fitiavana tokoa isika manoloana izany asan’Andriamanitra izany. Fa rehefa manana fitiavana anie dia mahavita zavatra tsara e! koa mila manam-pitiavana ihany koa isika dia afaka mikolokolo izaly solika ao anatintsika ka ahafahantsika mitsena ilay mpampakatra. Mila mibebaka mandrakariva satria isika dia in-77 impito no manota ao anatin’ny iray andro. Ka hananantsika hery manohitra ny asan’ny devoly, izay manangoly sy mitady làlana hidirana eo amin’ny fianantsika, ka ny handavo indrindra ny mpanompon’Andriamanitra izany. Betsaka ny fampihorohoroana etsy sy eroa, fa ny mpanompon’Andriamanitra dia tsy tokony hihorohoro ny amin’izany satria, ny Fanahy izay ao anatsintsika dia Fanahy mahery tsy azo ampihorohoroana. Ka mila mijoro amin’izany isika manoloana izay rehetra mitranga. Ny olona manana an’I Jesosy Kristy dia manana fiadanana, manana fifaliana, tony, satria ny Fanahin’Andriamanitra no efa mitoetra ao anatintsika.
Koa izao no tenin’Andriamanitra amintsika androany izay hita ao amin’ny 1 Petera 5:7-11 mba hampiorina antsika amin’izany finoana izany, ka hahazoantsika mitahiry ny solika ao anatintsika, 1 Petera 5:7-11 “Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo. Mahonona tena, miambena; fa ny devoly fahavalonareo mandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra aran’izao tontolo izao. Ary andriamanitry ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo ho any amin’ny voninahiny mandrakizay ao amin’I Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety hianareo, dia Izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hammpitoetra anareo. Ho Azy anie ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen."